4 usoro nri achicha dị mfe ma dị ọnụ ala maka nri abalị nri aperitifs - TELES RELAY
By bryanekobe	 On Apr 22, 2021
Youchọrọ ịhazi nri abalị aperitif na-enweghị obere nrụgide? Nke a bụ usoro nri achicha dị mfe 4 ma dị ọnụ ala iji mee ndị ọbịa gị obi ụtọ!
You nwere ezigbo ndị enyi ole na ole ị maghị ihe ị ga-esi ha? N’izugbe, ihe kachasị mma bụ ịtụgharị na nri abalị aperitif. Enyi na mmefu ego, usoro a zuru oke maka nri na-enweghị nchekasị nke ga-amasị mmadụ niile. Mgbe ụfọdụ, a na-atụ aro ka ị kwadebe obere efere ole na ole dị mfe iri na nke ga-adị ngwa ngwa ịkwadebe.. Kedu ihe nwere ike ịka mma karịa ịme achịcha dị ụtọ ma na-atọ ụtọ iji mee ndị ọbịa gị obi ụtọ? Nke a bụ ihe kpatara ya, taa, anyị na-enye gị 4 usoro nri achicha dị mfe ma dị ọnụ ala ka ị dịrị njikere maka mgbede gị.
Zucchini na anụ ezi achicha
Maka ndị mmadụ:
250 g ntụ ọka
150 g nke anụ ezi
4 akwa niile
Mmiri ara ehi cl 15
1 log nke ewu cheese
1 sachet nke ntụ ntụ
5 tablespoons nke mmanụ oliv
Bọta maka ebu
Nchịkọta 1 nke nnu
Sichaa zukini ma bee ya na mpekere. Agba anụ ezi ahụ na mpekere zucchini na pan maka ihe dị ka nkeji iri, karịrị ọkara ọkụ yana otu tablespoon nke mmanụ oliv. Kpochapu oven na 180 Celsius C. Ghichaa ntụ ọka ahụ na ntụ ọka, nnu na ose n'ime nnukwu efere. Gwuo olulu mmiri wee gbakwunye àkwá ahụ, nke fọdụrụ n'ime mmanụ oliv na mmiri ara ehi. Mix ruo mgbe inweta a homogeneous mgwakota agwa. Bee akwa chiiz ewu na cubes. Gbakwunye zucchini, anụ ezi na chiiz ewu na mgwakota agwa na mix. Enubanye a nke ọma buttered achicha ebu. Ime 1 awa. Kporie nri gị !
Ntụziaka dị na Cuisine Actuelle.
200 g chocolate gbara ọchịchịrị
240 g ntụ ọka
150 g shuga
75 g gbazee bọta
1 iko ọkara mmiri ara skimmed
Kuki Vanilla: Ntụziaka site na Nzọụkwụ - Nzọụkwụ na Ahụ Ike
Kedu esi eme achịcha quinoa? - Mee ka ahụike gị ka mma
Ntụziaka nke na-eme ukpa flan - nzọụkwụ ahụ ike
Blanch na àkwá na shuga. Jiri nwayọ tinye bọta ka ọ ghara ịdata nsen ahụ. Tinye ntụ ọka na ntụ ọka. Tinye mmiri ara ehi. Wunye ọkara nke mgwakota agwa n'ime bred na butter achicha. Agbazekwa na chocolate n'elu obere okpomọkụ. Gbakwunye chocolate gbazee na mgwakota agwa ndi ozo. Wunye mgwakota agwa chocolate na mgwakota agwa di na mbu. Jiri mma, gwakọta pasta 2 ngwa ngwa site na ịmegharị site n'aka ekpe gaa n'aka nri na site n'aka nri gaa n'aka ekpe na ebu. Ime na 160 Celsius C (thermostat 5-6) ruo mgbe ọnụ mma ahụ ga-apụta nkụ. Na-apụta mgbe mma. Ọ dị njikere!
Ntụziaka dị na Marmiton.
Tomato, mozzarella na achicha basil
150 g ntụ ọka
12 nke mmiri ara ehi dum
1 ụyọkọ basil
10 cl nke mmanụ oliv
Bee tomato, gbue ha ma bee ha obere obere cubes. Tinye ha n’ime pan jiri mmanu oliv ma sie nri n’obere nkeji ise ka ha kpoo ha. Bee mozzarella n'ime obere iberibe. Richaa basil, kpoo ya, gbue ya ma gwakọta ya na tomato. Wunye ntụ ọka na ntụ ịme achịcha n'ime efere, mix. Agbaji àkwá ahụ n'otu n'otu n'ime nnukwu efere ma gbanye ya ngwa ngwa. Gbakwunye Gruyere grated, kpalite nkwadebe. Jiri nwayọ webata mmanụ oliv mgbe ị na-agwakọta iji zere akpụ. Mee ka mmiri ara ehi na-ekpo ọkụ na ite ma wụsa ya nke ọma n'ime nnukwu efere ahụ. Tinye tomato na mozzarella ma jiri nwayọ nwuo. Wunye mgwakota agwa n'ime achicha achicha a na-edeghị ede wee mee maka minit 45. Lelee nsonye na ọnụ mma. Mee ka jụụ tupu ị na-eje ozi. Kporie nri gị !
Achicha Na aki
125 g powdered shuga
100g aki oyibo grated
Mmiri ara ehi cl 10
5 tablespoons nke sunflower mmanụ
1 akpa ntụ ịme achịcha
Kpochapu oven na 180 Celsius C. Wunye ntụ ọka ahụ na nnukwu efere na aki oyibo, shuga na yist. Gwakọta ma gwuo olulu mmiri n'etiti. N'ime olulu mmiri ahụ, agbaji àkwá niile, wụsa mmanụ ma jiri nwayọọ gwakọta. Nke nta nke nta wunye na mmiri ara ehi na mix ruo mgbe mgwakota agwa bụ ezigbo onye. Bọta achicha achicha ma wụsa mgwakota agwa n'ime ya. Ime 40 nkeji. Ọ dị njikere!
Nke a bụ nri 5 iji zere mgbe ị nwere isi ọwụwa
4 Ezi ntụziakaaperitifsNri
A bụ otú humidify gị ulo maka ike ndụ
Griin elu: nri, uru na ojiji na nri - Meziwanye ...